Warqado sir ah oo laga helay shidaal baaristii ugu horeysey ee laga sameeyey Soomaalia. – Radio Daljir
Warqado sir ah oo laga helay shidaal baaristii ugu horeysey ee laga sameeyey Soomaalia.
Maarso 3, 2017 9:37 g 0
Sida uu qoray wargeyska Chicago Tribune cadadkiisa soo baxay March 22, 1948, Itoobiyadii Haile Sellasie waxay heshiis 50 sannadood, oo dhammaan xuquuqda shidaal baarista la wareejinayo, la gashay shirkadda Sinclair Oil Company ee Americanku lahaa sannadkii 1945 si ay shidaal uga baarto dhulka Soomaali Galbeed (Ogadenia). Saddex sannadood ka hor, Haile Sellaise waxaa xukunka ku soo celiyay Ingiriiska kaddib markii uu ku duulay, xukunkana ka tuuray Talyaaniga. Heshiiskaas oo u dhaxeeyay Itoobiya iyo shirkadda Maraykanka laga la tashadayna gumeysiga Ingiriiska ee gobolkaas joogay, waxaa ka carooday shacabka deegaanka iyo ururkii xoriyad doonnka SYL.
Sida ku cad qoraalada Hey’adda Sirdoonka Maraykanka (CIA) ee la qoray 24 October 1947, ururkii SYL ee uu markaas madaxda u ahaa Xaaji Maxamed Xuseen, ayaa August 6, 1947 waxay warqad u direen taliyaha Ingiriiska ee gobolkaas, asagoo u sheegay in Soomaalida ay Itoobiya ka xuroobi doonnaan, Sinclair-na ay Soomaali mooye cid kale heshiis la gali karin.
Isla bishaas August 8-9, waxaa socda kacdoon ay dhalinyaradu sameynayaa, sida ku cad Chicago Tribune iyo CIA qoraalkeeda. Dhalinyada gawaarida shirkada oo wada geologist-yaasha ayay ku hareereeyeen meel u dhow Dhagaxbuur, waa xabadeeyeen, qaarkood waa la xiray, booliska ayaa kala eryay. Kacdoon culus ayay qaadeen.
DHEGEYSO-Horyaalka heerka 1aad ee Puntland oo meel wanaagsan maraya.
Ra’iisul wasaare Khayre oo farriin u diray ururka Alshabaab